Dhaabbileen mirga namoomaa Ruwaandaaf xalayaa barreessan - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright GALI TIBBON
Goodayyaa suuraa ALA 2014 baqattoonni Isiraa'eel keessa jiraatan mirgi kolugaltummaa akka kennamuuf gaafachuuf wayita hiriira bahanitti
Dhaabileen mirga namoomaa Israa'ee gurguddoon torba waliin ta'uun, Ruwaandaan godaantoota Isiraa'eelii dirqisiifamuun harii'ataman akka hin fudhannee gaafachuun pirezidaantii Ruwaandaa Pool Kaagaameef xalaayaa barreessan.
Ministrri mummichaa Isiraa'eel Beeniyaamiin Netaaniiyaahuu fi Pirezidaantiin Ruwaandaa Pool Kaagaameen, haala godaantoonni Afiriikaa kumaatamatti lakkaa'aman itti Isiraa'eel irraa gara Ruwaandaatti ittiin ce'ani irratti marii kana dura eegalan guduunfuuf Roobii walarguuf jiru.
Ministirri mummichaa Isiraa'eel Beeniyaamiin Netaaniyaahuu ibsa ummata Isiraa'eeliif kennaniin, sochiichi baqattoota biyyattii keessaa baasuu irratti xiyyeeffachuu himaniiru.
Ministirri Dhimma Alaa Ruwaandaa, Luuwiis Mushikiwaabo gaazexaa Niwus Taayimsitti akka himanitti, garuu baqattoonni biyyi isaanii simattu kenneen fedha isaaniitiin dhufan qofadha.
Dhimmi kunis Isiraa'eeliitti moormii uummataa olaanaa kaasiseera. Dhaabbileen mirga namoomaa Israa'eel torbanis Pirezidaanti Pool Kaagaameen ibsa akka kennan gaafataniiru.
''Kabajamoo Pool Kaagaamee Pirezidaantii Ruwaandaa, isinii fi lammiilee keessan irraa deeggarsa atattamaa barbaanna. Isiraa'eelii fi Ruwaandaan hariiroo gaarii qabaataniyyuu, hariiroon isaanii kun kan jireenya baqattoota Afrikaa akka shaqaxaatti dhiyeessu ta'uu of keessaa qabaachuun irra hin jiru,'' Jechuun gaafataniiru.
Ministrri mummichaa Isiraa'eel Beeniyaamiin Netaaniiyaahuu uummataa Isiraa'eelitti akka himanitti, Ruwaandaan baqattoota Afrikaa simachuuf waliigaltee jirti. Itti aansuunis, ''Baqattoonni dirqisiifamuun haa bahan. Gara Ruwaandaas deemu hinbarbaadan yoo ta'ee ni hidhamu,'' jedhaniiru.
''Waliigaltee bilisummaa namootaa sarban kan akka kanaa akka hin fudhanne; isinii fi ummata Ruwandaa irraatti amantaa qabna. Baqattoonni Afrikaa bifa kanaan akka gurguraman akka walii hin galtan ni abdanna. Baqattoota fedhii isaatiin ala harii'ataman akka hinsimannee Ministira Netaniyaahuu nuuf beeksisaa,'' jedha xalayichi.
''Walitti dhufeenya gaarii Beeniyaamiin Neetaniyahuu waliin qabdanitti fayyadamuun Isiraa'eel biyya baqattootaa ta'uu ishee akkasumas baqattoota Ertiraa fi Sudaan simachuun keessumessu akka qabdu itti nuuf himaa,''
Dhaabbileen xalayicha walitti barreessan torbanis kan itti aananiidha:
Isiraa'eelitti Dhaabbata Baqattootaa fi Gaafattoota kolugaltummaaf Kennitoota deegarsaa (ASSAF)
Isiraa'eelitti Ogeessoota Walaansaa mirga namoomaaf mormanii
Ragaa boqqaatoota godaantootaa
Dhaabbata mirga namoomaa Aminastii Internaashinaal Isiraa'eel
Waldaa Mirgoota sivilii Isiraa'eel keessaa
Kav La'Oved - Sarara Hojattootaa